नेपालमा नै ए’सेम्बल गरेको बजाज पल्सर १२५ को बु’किङ खुल्ला, कति पर्ला मूल्य ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअटो अर्थ/बाणिज्यनेपालमा नै ए’सेम्बल गरेको बजाज पल्सर १२५ को बु’किङ खुल्ला, कति पर्ला मूल्य ?
काठमाडौं । केही महिना अघि भारतीय बजारमा सार्वजनिक भएको बजाज पल्सर १२५ को नेपाली बजारमा बु’किङ खु’ल्ला भएको छ । अबको केही दिनमा नै सार्वजनिक गर्ने त’यारी गरेको बजाज पल्सर १२५ को बु’किङ खु’ल्ला गरेको हो ।बजाज मोटरसाइकलका लागि नेपालको आ’धिकारिक वितरक एचएच बजाजले नेपालमा नै ए’सेम्बल गरेको बजाज पल्सर १२५ केही दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको हो ।यो मोटरसाइकल खरिद गर्न चाहाने ग्राहकले बजाजको आधिकारिक शोरुममा बुकिङ गर्न सक्नेछन् ।
यसको मूल्य बारे भने कम्पनीले जानकारी दिएको छैन। यद्यपी यसको मूल्य १५० भन्दा कम हुनेछ । हाम्रो अ’नुमान अनुसार यसको मूल्य २ लाख २० हजारदेखि २ लाख ३० हजार हा’रहारीमा पर्नेछ । अहिले नेपाली बजारमा पल्सर ब्रा’न्ड ने’मबाट बिक्री हुँदै आएको १५०, १६०, २००, र २२० सीसी इन्जिन क्ष’मताका मोटरसाइकल छन् । यी सबै पल्सर र पल्सर ए’नएस सिरिज नेपालमा नै ए’सेम्वल भइरहेका छन् ।यस्तो छ पल्सर १२५ : यो मोटरसाइकलमा कम्पनीले क्ला’स लि’डिङ फिचर दिएको छ । मोटर साइकललाई सा’र्प र स्पो’र्टी बनाउन क्लि’प अन ह्या’न्डलवार दिइएको छ ।
यसमा ५ स्पी’डको गि’यरबक्स दिइएको छ। नि’योन ब्ल्यू, सोलार रे’ड र प्ला’टिनम सिल्भर कलरमा आएको यो बाइक से’ग्मेन्ट लि’डर हुने दा’बी क’म्पनीले गरेको छ । यो मोटर साइकलमा १२५ सी’सी ए’यर कु’ल्ड सिंगल सिलिन्डर इ’न्जिन रहेको छ ।यसमा उपलब्ध ए’यरकुल्ड डि’टीएसआई इन्जिनले १३ बी’एच पा’वरका साथै १२ ए’नएम ट’र्क उ’त्पादन गर्छ ।
९६५८४ पटक पढिएको
८००१९ पटक पढिएको